Ukuya kwi-CAD okanye kwiCAD yokuShiya? -Izixhobo zeGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-Destination CAD okanye iCAD Resignation?
I-Destination CAD okanye iCAD Resignation?
Uhlobo olutsha lwe-AUGI World sele selufikile, lunomxholo othakazelisayo, njengokusebenza ngeSketchUp, i-pininos kunye neNET kunye nento ene-Revit.
Uhlobo lokufanisa olwenziwe nguMark Kiker luye lwandithathela ingqalelo, ngokubhekisele kukhetho lwendawo ekuyiwa kuyo ekhethwe sisixhobo seCAD. Nangona ukuqhelaniswa kwayo ngakumbi kuyilo lwendawo ekuya kuyo kunokuba kuthengiswe indawo esele ikho, ndicinga ukuba linqaku elihle, ndicinga ukuba ngenye imini abenzi bezixhobo baya kuba beqwalasele into enye. Ngalo nto, ukuba ibiyindawo yabakhenkethi, indlela yokunika umhambi ukhetho olunoluhambo olude kunelixa abaya kuba belapho, apho ukoneliseka kweentsuku ezintathu kubuyekeza ukonga iinyanga ezi-6, apho izinto ezongezelelekileyo abazibonisileyo zingaphoswa. ezinye iindlela ezizezinye, kwaye ngaphezulu kwayo yonke loo nto amava kukuba kufanelekile ukuyicebisa kungekuphela nje ngokuzingca kodwa nangokuzimisela ukuyiphinda kwakhona.
Oko akuthethi ukuba kuyisiphephelo sokuhlala, ukusebenza okanye ukuvelisa; Le ndlela inomdla, ingakumbi xa isetyenziswe, nangona uxwebhu lubonakala luyilo lonke iqonga le-CAD, akukho nto inokuphika inqanaba elithile lezinto ezikhethiweyo ngenxa yokusetyenziswa kweefowuni kunye nekhonkco yayo.
Umgangatho oqinile. Ngaba ifomathi eqinileyo, ecingwe kakuhle ifuna ukuguqulwa yonke iminyaka engama-2.375 XNUMX? Ke singatsho kuba i-velociraptor ibize ifayile Kusetyenziswa ngokubanzi, ngoko kufanele kube ngumgangatho.
Isoftware ihlaziywe. Ngaba sibhekisa kwimveliso yokugcotshwa kweminyaka nkqu neminyaka okanye utshintsho olwenziwe kwiminyaka engaqhelekanga? Ingayinto entle ukuba ayifuni ukwenza ikopi yecandelo kunye nendlela ephambeneyo yokwazi ukuba yeyiphi ingxelo ye-dwg esiyifumana kumthengi.
Indawo yokufunda Ndivuma ngokugqithiseleyo, ukugqithisa kwe-AutoCAD kunenzuzo enkulu ekunciphiseni ikhefu lokufunda, abanye abathandwayo abangaphantsi kufuneka balwe nxamnye nale nto.
Impendulo Ewe, kodwa uluhlu lwezinqweno luhlala lude kakhulu.
unebhanti lesixhobo esikhulu. Chanfle!
Iqela leNkxaso Kulungile, inkxaso ye-AutoDesk ayilunganga, kuba kukho phantse umntu ojikelezayo okanye ezininzi kwiwebhu ekulungele ukukunceda.
Ukwabelana kubaluleka Ngubani oyawuxabisa, ngokukhawuleza nje ukuba ulinganisiwe? ... Oo, ba bhe kisela kwi-pat ngasemva; vu melana
Musa ukulungele ukulungiswa, kodwa ube ngowona nto. Andivumi, kodwa andifuni ukuzikhethela. Isoftware ayisiyeyona ibalaseleyo kuba yeyona isetyenzisiweyo, sonke sikhumbula iMicrosoft ngokubhabha kwayo ukuba umgangatho weWindows waqinisekiswa sisabelo sentengiso esithenge isoftware kubo.
Imali ayinandaba. Umntu, nangona uhamba ngethuba lokutshata, olo thando alukwazi ukuthenga imali, imali UKUBA kubalulekile malunga nokubuyiswa kotyalo-mali.
Ngaphandle kwalonto, ndicebisa ukuba ndifunde olu hlelo lwe-AUGI World, egcwalisa iyantlukwano yezixhobo zemfundo zabasebenzisi be-AutoCAD ezibonelelwa ikakhulu ziingcali ezibuyisela amava abo kuluntu simahla. Ukuba ababhalisanga, kulungile ukwenza.
Umzekelo oqhelekileyo weCadastre
Ukuvelisa imemori yobugcisa yezicwangciso nge-CivilCAD